Raha afaka mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra ianao; iza izany? Angamba "lehibe": araka ny famaritana ny maha? Fa maninona ny olona no tsy maintsy mijaly? Na "kely" nefa mbola maika: Inona no nitranga tamin'ny alika nandositra ahy fony aho folo taona? Ahoana raha manambady ny fahazazako aho? Fa naninona no nataon'Andriamanitra ho manga ny lanitra? Na angamba ianao nanontany azy hoe: "Iza ianao?" na "Inona ianao?" na "Inona no tadiavinao?" Ny valiny momba izany dia mety hamaly ny ankamaroan'ny fanontaniana hafa. Iza ary Andriamanitra ary inona no tadiaviny dia fanontaniana fototra momba ny toetrany, ny toetrany. Avy amin'izany no ahalalàna ny zavatra rehetra: nahoana ny an'izao rehetra izao dia misy; iza isika raha olona; fa maninona ny fiainantsika no misy azy io sy ny fomba hamolavolana azy. Puzzles izay mety efa noeritreretin'ny tsirairay teo aloha. Afaka mahazo valiny isika, fara fahakeliny. Afaka manomboka manomboka mahazo ny toetran'Andriamanitra isika. Azontsika atao mihitsy aza ny mandray anjara amin'ny natioran'Andriamanitra, tsy dia mampino toy ny inona. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alàlan'ny fanambaràn'Andriamanitra.
Ny mpandinika ny vanim-potoana rehetra dia nanao ny sarin'Andriamanitra isan-karazany. Fa Andriamanitra dia maneho amintsika ny tenany amin'ny alàlan'ny zavatra noforoniny, tamin'ny alàlan'ny teniny ary tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy Zanany. Asehony antsika hoe iza izy, inona izy, inona no ataony, na dia kely aza, ny antony anaovany an'izany. Nolazainy koa hoe inona no fifandraisana tokony hataontsika aminy ary inona no endrika hanan'ity fifandraisana ity amin'ny farany. Ny fepetra takiana voalohany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny toe-tsaina tia mandray sy manetry tena. Tokony hanaja ny tenin'Andriamanitra isika. Avy eo Andriamanitra dia maneho amintsika ny tenany (Isaia 66: 2) ary hianatra ny ho tia an’Andriamanitra sy ny lalany isika. "Izay tia ahy", hoy i Jesosy, dia hitandrina ny teniko; ary ny Raiko ho tia azy, ary isika manatona azy ka hiara-mitoetra aminy » (Jaona 14:23). Te hiaina miaraka amintsika Andriamanitra. Rehefa manao izany izy dia mahazo valiny mazava kokoa momba ny fanontaniantsika.
1. Mikaroka ny Mandrakizay
Niady mafy ny olona mba hanazava ny niaviany sy ny maha-izy azy ary ny dikany eo amin'ny fiainana. Ity tolona ity mazàna dia mitarika azy amin'ny fanontaniana hoe misy Andriamanitra ary iza no mampiavaka azy. Rehefa nanao izany ny olona dia tonga amin'ny sary sy hevitra isan-karazany.
Lalana miverina mankany Edena
Ny fanirian'olombelona taloha ny fandikana ny maha-izy azy dia hita taratra amin'ireo trano maro samihafa misy ny foto-pinoana misy. Avy amin'ny torolàlana maro samihafa no nitadiavan'ny olona iray hanatonana ny niandohan'ny fisian'ny olombelona ary noho izany ilay heverina ho fitarihana ny fiainan'olombelona. Mampalahelo fa ny tsy fahafahan'ny olombelona mahatakatra tsara ny zava-misy ara-panahy dia niteraka resabe sy fanontaniana hafa ihany:
Pantheist dia mahita an’Andriamanitra amin'ny maha-hery sy lalàna rehetra izay ao ambadiky ny kosmos. Tsy mino Andriamanitra tokana izy ireo ary mandika ny tsara ho ratsy toy ny masina.
Mino ireo andriamanitra masina ny polytheist. Ny andriamanitra tsirairay dia afaka manampy na manisy ratsy, nefa tsy misy manana fahefana tanteraka. Noho izany dia tokony hiankohoka ny tsirairay. Betsaka ny finoana antonony any Moyen Orient sy Grika-Romana ary koa ny fanahin'ny fanahy sy ny razana amin'ny kolontsaina ara-poko maro no na noforonina polytheistically.
Ny mino dia mino an'Andriamanitra tokana ho fototra, mpanohana ary ivon'ny zava-drehetra. Raha misy ny andriamanitra hafa dia esorina tsy misy dikany, izany dia olan'ny monotéisma, satria aseho amin'ny endrika madio ao amin'ny finoana ny rain'i Abrahama. Fivavahana eran-tany telo no niantso an'i Abrahama: ny Jodaisma, ny Kristianisma ary ny finoana silamo.
Misy andriamanitra ve?
Ny kolontsaina rehetra eo amin'ny tantara dia namolavola fahatsapana fahatongavana ho matanjaka kokoa fa misy Andriamanitra. Ny fisalasalana izay mandà an'Andriamanitra dia nanam-pahasarotana foana. Atheism, nihilism, existentialism - ireo rehetra ireo dia manandrana mandika an'izao tontolo izao tsy misy mpamorona mahery vaika sy manokana izay mamaritra ny tsara sy ny ratsy. Amin'ny farany, ireo filozofia ireo sy ireo mitovy amin'ny filozofia dia tsy manome valiny mahafa-po. Raha ny hevitr'izy ireo, izy ireo dia manilika ny fanontaniana fototra. Ny tena tiantsika ho jerena dia inona ny karazana zavaboary namorona, ny nokasainy hatao sy ny tokony hitranga, mba hahafahantsika miaina mifanaraka tsara amin'Andriamanitra.
2. Ahoana no fomba anambaran'Andriamanitra antsika?
Apetraho eo amin'ny toeran'Andriamanitra ny tenanao. Izy ireo no namorona ny zava-drehetra anisan'izany ny olombelona. Ianao no nanao ny olona tahaka ny endrinao (Genesisy 1: 1-26) ary nomeny fahafahana hanana fifandraisana manokana aminao. Tsy hiteny zavatra momba ny tenanao ve ianao? Lazao azy izay tianao hataony? Asehoy azy ny fomba ahafahany mahazo ny fifandraisana tianao amin'Andriamanitra. Izay rehetra mihevitra fa Andriamanitra tsy ekena dia manaiky fa Andriamanitra dia miafina amin'ny zavatra noforoniny. Saingy Andriamanitra manambara ny tenany amintsika: amin'ny zavatra noforoniny, amin'ny tantara, ao amin'ny Baiboly ary amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy zanany. Andeha hodinihintsika ny zavatra asehon'Andriamanitra antsika amin'ny alàlan'ny fanambarany tena.
Ny fahariana dia manambara amin'Andriamanitra
Afaka mankasitraka ny cosmos lehibe ve ny olona iray ary tsy te hiaiky fa misy Andriamanitra, dia mitazona ny fahefana rehetra eo am-pelatanany izy, hamela ny filaminana sy ny firindrana? Romana 1:20: "Fa ny tsy hita maso Andriamanitra, dia ny heriny sy ny maha-Andriamanitra azy dia efa hita hatrany amin'ny asany hatramin'ny namoronana izao tontolo izao, raha misy mahita azy." Gaga i David Mpanjaka tamin'ny fahitan'ny lanitra fa nanao zavatra tsy misy dikany toy ny olombelona Andriamanitra: "Raha mahita ny lanitra aho, miasa ny rantsantananao, ny volana ary ny kintana nomaninao: inona ny olombelona mahatsiaro azy sy ny zanak'olombelona no ahatsianao azy? " (Salamo 8: 4-5).
Ny fifandonana lehibe amin'ny mampiahiahy an'i Joba amin'Andriamanitra ihany koa dia malaza. Nasehon'Andriamanitra azy ny fahagagana ary porofon'ny fahefany sy ny fahendreny tsy misy fetra. Nameno ny fanetren-tena i Joba. Ireo lahatenin Andriamanitra dia azo jerena ao amin'ny bokin'i Joba ao amin'ny toko 38 ka hatramin'ny 41. "Fantatro" hoy i Joba, fa afaka manao na inona na inona ianao ary tsy misy zavatra tadiavinao hatao fa sarotra loatra aminao ... Izany no nahatonga ahy hiresaka hadalana momba ny zavatra avo loatra ho ahy ary tsy azoko ... efa nahenoiko reko tamin'ny sofina ihany, fa izao kosa no nahitan'ny masoko anao " (Joba 42: 2-3,5). Avy amin'ny fahariana ihany no tsy ahitanay fa misy Andriamanitra, dia mahita ny toetran'ny toetrany avy Aminy koa isika. Midika izany fa ny drafitra eo amin'izao tontolo izao dia mila planner, lalàna voajanahary ho mpanao lalàna, ny fiarovana ny zava-drehetra dia mpamorona ary ny fisian'ny fiainana ara-batana manome mpanome fiainana.
Drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona
Inona no nokendren'Andriamanitra rehefa namorona ny zava-drehetra izy ary nanome antsika fiainana? Nanazava tamin'ny Atenianina i Paoly hoe: "... nataony ho olombelona iray manontolo ny olombelona manontolo mba honenan'izy ireo manerana izao tontolo izao, ary nitazona ny halavany izy ireo ary ao anatin'ny fetra tokony hiveloman'izy ireo mba hitadiavana an'Andriamanitra. na mba nahatsapa izy ireo ary nahita azy, ary tsy lavitra antsika tsirairay avy izy, satria miaina sy manenona ao aminy isika, ary araka ny nolazain'ny poety sasany taminao: Avy amin'ny taranany isika " (Asan’ny Apostoly 17: 26-28). Na tsotra fotsiny, araka ny nosoratan'i Johannes, dia "tia isika satria efa tia antsika voalohany" (1 Jaona 4:19).
Ny tantara dia manambara amin'Andriamanitra
Manontany tena ireo tsy mino fa "Raha misy Andriamanitra, maninona no tsy miseho amin'izao tontolo izao ny tenany?" Ny fanontaniana voalohany dia mihevitra fa tsy mbola naneho ny tenany tamin'ny olombelona Andriamanitra. Ary ny faharoa, tsy misy ilain'ny olombelona izy na farafaharatsiny tsy manao na inona na inona momba izany. Ara-tantara ary ny Baiboly dia mirakitra firaketana ara-tantara maro, ny fiheverana roa dia tsy azo ekena. Hatramin'ny andron'ny zanak'olombelona voalohany dia matetika Andriamanitra dia nifandray mivantana tamin'ny olona. Saingy matetika ny olona tsy te hahalala na inona na inona momba azy ireo!
Nanoratra i Isaia: "Eny, Andriamanitra miafina ianao ..." (Isaia 45:15). Matetika Andriamanitra "manafina" Andriamanitra rehefa mampiseho azy amin'ny fisainany sy ny fihetsiny ny olona fa tsy maniry hifandray aminy na amin'ny lalany izy ireo. Hoy koa i Isaia avy eo: "Indro, ny sandrin 'ny Tompo dia tsy fohy loatra ka tsy afaka manampy, ary ny sofiny tsy nihamafy ka tsy mandre, fa ny trosanao dia mampisaraka anao amin Andriamanitra ary manafina ny fahotanao. ny tavany eo alohanao fa tsy ho re ianao " (Isaia 59: 1-2).
Nanomboka tamin’i Adama sy Eva daholo izany. Nahary azy ireo Andriamanitra ary nametraka azy ireo eo amin'ny zaridaina mamony. Ary rehefa avy eo izy dia niresaka mivantana taminy. Fantatr'izy ireo fa teo izy. Nasehony azy ireo ny fomba hahitana ny fifandraisana aminy. Tsy navelany ho azy ny tenany, tsy maintsy nanao safidy i Adama sy i Eva. Tsy maintsy nanapa-kevitra izy ireo raha hivavaka amin'Andriamanitra (amin'ny heviny an'ohatra: mihinana amin'ny hazon'aina) na tsy miraharaha an'Andriamanitra (amin'ny heviny an'ohatra: hano amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy). Ny hazo ratsy no nifidianana anao (Genesisy 1 sy 2). Na izany aza dia matetika tsy hadino fa fantatr'i Adama sy Eva fa tsy nankatò an'Andriamanitra izy ireo. Nahatsiaro tena ho meloka izy. Tamin’ny fotoana manaraka rehefa tonga niresaka tamin’izy ireo ny Mpamorona dia nahare «Andriamanitra Tompo nandehandeha tao anaty zaridaina ny andro rehefa nangatsiaka ny andro. Ary Adama sy ny vadiny dia niafina tao ambanin’ ny hazo teo anoloan ’Andriamanitra Tompo ao an-jaridaina" (Genesisy 1: 3).
Ka iza no niafina? Tsy Andriamanitra! Fa ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Tian'izy ireo ny elanelana, fisarahana eo aminy sy aminy. Ary izany no nijanona hatrizay. Ny Baiboly dia feno ohatra ny amin'ny fanoloran-tànana fanampiana ho an'ny olombelona sy ny olombelona namadika io tanana io. Noa, "mpitory ny fahamarinana" (2 Petera 2: 5), nandany taon-jato feno nampitandrina an'izao tontolo izao ny amin'ny didim-pitsaran'Andriamanitra ho avy. Tsy nandre izao tontolo izao ka tototry ny rano. Ilay Sodoma sy Gomora Andriamanitra mpanota noravan'ny tafio-drivotra, ny setroka dia niakatra ho toy ny fanilo "toy ny setroka avy amin'ny lafaoro" (Genesisy 1: 19). Na io didim-pinoana io aza tsy nanatsara an'izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny Testamenta Taloha dia mampiseho ny fiheveran'Andriamanitra ny vahoaka Isiraely voafidy. Tsy nety nihaino an’Andriamanitra koa ny Isiraely. "... aza avela hiresaka aminay Andriamanitra", hoy ny fitarainan'ny vahoaka (Genesisy 2: 20).
Niditra an-tsehatra koa Andriamanitra rehefa tonga ny fahefana lehibe toa an'i Egypt, Nineveh, Babyion ary Persa. Niresaka mivantana tamin'ireo mpitondra ambony indrindra izy. Saingy nanenjana hatrany ny fiainana an'izao tontolo izao. Ny tena ratsy indrindra dia maro tamin'ny mpanompon'Andriamanitra no novonoin'ireo izay te hitondra ny hafatr'Andriamanitra ho azy ireo. Milaza amintsika toy izao ny Hebreo 1: 1-2 farany: "Taorian'ny nitenenan'Andriamanitra tamin'ny razana tamin'ny alàlan'ny mpaminany, tamin'ny andro farany, dia niresaka tamintsika tamin'ny alàlan'ny zanakalahy ..." Jesosy Kristy dia niditra teto amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsaran'ny famonjena sy ny fanjakan'Andriamanitra. Vokany? "Teo amin'izao tontolo izao Izy, ary Izy no nahary azy, fa izao tontolo izao tsy nahalala azy" (Jaona 1:10). Ny fihaonany tamin'izao tontolo izao dia nitondra azy ho faty.
Jesosy, ilay tonga nofo dia naneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fangoraham-pony tamin'ny zavatra noforoniny: "Ry Jerosalema, ry Jerosalema, dia mamono sy mitora-bato ny mpaminany nirahina ho anao ianao! Impiry aho no maniry ny hiangona ny zanakao, tahaka ny akoho manangona ny zanany ao ambany ny elany, ary tsy tianao izany! " (Matio 23:37). Tsia, Andriamanitra tsy mania. Efa naneho ny tenany izy teo amin'ny tantara. Fa ny ankamaroan'ny olona dia nanakimpy maso azy.
Ny fijoroana ho vavolombelona ara-Baiboly
Mampiseho antsika Andriamanitra amin'ireto fomba manaraka ireto ny Baiboly:
Ny fanambaran'Andriamanitra momba ny toetrany
Noho izany, ao amin'ny Eksodosy 2:3, dia nanambara ny anarany tamin'i Mosesy izy: "Izaho ho izay ho tozako." Nahita roimemy nirehitra tsy levon'ny afo i Mosesy. Amin'ity anarana ity dia manaporofo ny maha-tena sy fianana-tena izy. Ny lafiny hafa amin'ny toetrany dia aseho amin'ny anarany ara-baiboly hafa. Nandidy ny Isiraelita Andriamanitra: "Koa ho masina ianareo, satria masina aho" (Genesisy 3: 11). Masina Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 55: 8, dia milaza amintsika mazava Andriamanitra hoe: "... ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanao tsy lalan-kalehako ..." Velona Andriamanitra ary mihetsika amin'ny haavo ambony kokoa noho isika. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tamin'ny endrika olombelona. Izy mamaritra ny tenany hoe "fahazavan'izao tontolo izao" (Jaona 8:12), ilay antsoina hoe "Izaho" izay niaina talohan'i Abrahama (Andininy 58) ho "varavarana" (Jaona 10: 9) ilay “Mpiandry tsara” (Andininy 11) ary ho "lalana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14:6).
Ny fanambaran'Andriamanitra momba ny asany
Ny fanaovan-javatra dia ampahany amin'ny fisian'ny, na avy aminy. Fanambarana momba ny fanaovana noho izany dia mifameno ireo fanambarana momba ny fototra. Ataoko ny "ny mazava ... ka mamorona ny maizina", hoy Andriamanitra momba ny tenany ao amin'ny Isaia 45: 7; Izaho dia manome "fandriam-pahalemana ... ary mampidi-doza. Izaho no Jehovah izay manao an'izany rehetra izany." Andriamanitra no namorona izay rehetra. Ary tompony ny nahary. Manambara mialoha ny ho avy koa Andriamanitra: "Izaho no Andriamanitra fa tsy misy hafa, Andriamanitra tsy misy hafa. Efa notantaraiko hatramin'ny voalohany ny zavatra ho avy sy mialoha ny zavatra tsy mbola tonga. Hoy aho: Izay ataoko nanapa-kevitra ary nitranga ary izay rehetra kasaiko hatao "," (Isaia 46: 9-10). Tian'izao tontolo izao Andriamanitra ary nirahiny ny zanany hitondra ny famonjena ho azy. "Tian'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay" (Jaona 3:16). Amin'ny alàlan'i Jesosy dia entin'Andriamnitra ao amin'ny fianakaviany Andriamanitra. Hoy ny Apokalypsy 21: 7: "Izay maharesy dia handova ny zava-drehetra, ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho zanako". Momba ny ho avy Jesosy dia nilaza hoe: "Indro, ho avy tsy ho ela aho ary ny valim-pitondrako miaraka amiko dia ny hanome ny olon-drehetra ny asany" (Apokalypsy 22:12).
Fanambarana avy amin'ny olona momba ny toetran'Andriamanitra
Andriamanitra dia nifandray tamin'ny olona izay nofidiny hanatanteraka ny sitrapony. Maro tamin'ireny mpanompo ireny no nanome tsipiriany momba ny toetran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. "... ny Tompo no Andriamanitsika, ny Tompo irery," hoy i Mosesy (Genesisy 5: 6). Hafa misy andriamanitra iray. Ny Baiboly dia maneho ny fihetseham-po. (Raha mila fanazavana fanampiny, jereo ny toko fahatelo). Amin'ireo fanambarana maro an'ny mpanao salamo momba an'Andriamanitra eto ihany, dia izao: "Fa iza no Andriamanitra raha tsy Jehovah, na vatolampy raha tsy Andriamanitsika?" (Salamo 18:32). Andriamanitra irery no tokony hivavaka, ary manatanjaka izay mivavaka aminy izy. Misy fahitana be dia be momba ny toetran'Andriamanitra ao amin'ny Salamo. Ny iray amin'ireo andininy mampionona indrindra ao amin'ny Soratra Masina dia ny 1 Jaona 4:16: "Andriamanitra dia fitiavana ..." Ny fahitana iray lehibe momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny finiavany ambony ho an'ny olona dia hita ao amin'ny 2 Petera 3: 9: "Ny Tompo. .. tsy te hisy ho very, fa maniry ny hahita fibebahana ny tsirairay. " Inona no fanirian'Andriamanitra lehibe indrindra ho antsika, ny zavaboariny, ny zanany? Ho voavonjy isika. Ary ny Tenin'Andriamanitra dia tsy miverina irery aminy foana - hanatanteraka izay kasaina hatao (Isaia 55:11). Ny fahafantarana fa ny fikasan'Andriamanitra mafy dia ny hamonjy antsika ary afaka manao izany Izy dia tokony hanome fanantenana lehibe ho antsika.
Ny Baiboly dia misy fanambarana avy amin'ny olona momba ny zavatra nataon'Andriamanitra
"Andriamanitra manantona ny tany amin'ny tsy misy", hoy ny Joba 26: 7. Izy io dia mitarika ny hery izay mamaritra ny orbit sy ny fihodinan'ny Tany. Teo an-tanany ny fiainana sy ny fahafatesana ho an'ny mponina eto an-tany: "Raha manafina ny tavanao ianao dia raiki-tahotra; raha maka ny fofon'aina ianao dia handia ary ho lasa vovoka indray. Alefanao ny fofonain'izy ireo, dia hamboarina izy ary hanamboatra vaovao ianao. ny endriky ny tany " (Salamo 104: 29-30). Na izany aza, Andriamanitra, mahery indrindra, amin'ny maha-mpamorona be fitiavana, dia nanao ny olona tahaka ny endriny ary nanome azy hanjaka amin'ny tany (Genesisy 1: 1). Rehefa nahita izy fa niely tety an-tany ny "ratsy fanahy" dia nanenina izy nanao ny olombelona teto an-tany ka nanelingelina azy tao am-pony " (Genesisy 1: 6). Namaly ny faharatsian'izao tontolo izao izy tamin'ny fandefasana ny tondra-drano izay nandevona ny zanak'olombelona rehetra afa-tsy i Noa sy ny fianakaviany (Genesisy 1: 7). Taty aoriana Andriamanitra dia niantso an'i Abrahama patriarka ary nanao fanekem-pihavanana taminy hitahy ny "lahy rehetra eto ambonin'ny tany" (Genesisy 1: 12-1) miresaka momba an'i Jesosy Kristy, taranaky Abrahama. Tamin'ny namoronany ny firenen'israely dia tamin'ny fomba mahagaga no nitondrany azy ireo namaky ny Ranomasina Mena ary noravany ny tafika egyptiana: "... soavaly sy olona no natsipiny tany amin'ny ranomasina" (Genesisy 2: 15). Nandika ny fifanarahana nataony tamin'Andriamanitra ny Isiraely ary nanimba ny herisetra sy ny tsy rariny. Noho izany, dia navelan Andriamanitra hanafika ny firenena hafa ny firenena ary avy eo dia notarihin'ny Tany Nampanantenaina ho andevo (Hesekiel 22:23-31; 36:15-21). Ilay Andriamanitra be famindram-po kosa dia nampanantena fa handefa mpanavotra eto amin'izao tontolo izao mba hanao fanekena mandrakizay amin'ny fahamarinana miaraka amin'ireo rehetra mibebaka amin'ny fahotany, israelita ary tsy Israelita (Isaia 59: 20-21). Ary farany dia naniraka ny Zanany Jesosy Kristy. Nanazava i Jesosy hoe: "Fa izao no sitrapon'ny Raiko, na zovy na zovy no mahita ny zanany ka mino azy dia hanana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany" (Jaona 6:40). Nanome toky Andriamanitra: "... izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena" (Romana 10: 13).
Androany dia manatanjaka ny Fiangonany Andriamanitra hitory ny Filazantsaran'ilay Fanjakana "ho vavolombelona amin'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao." (Matio 24:14). Tamin'ny andro Pentekosta taorian'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy, dia nandefa ny Fanahy Masina Andriamanitra hampiray ny Fiangonana: amin'ny vatan'i Kristy sy hanambara ny misterin 'Andriamanitra amin'ny kristiana (Asan’ny Apostoly 2: 1-4).
Ny Baiboly dia boky momba an'Andriamanitra sy ny fifandraisan'ny olombelona aminy. Ny hafatrao dia manasa antsika hitrandrahana mandritra ny androm-piainana hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra, inona izy, inona no ataony, inona no tadiaviny, inona no kasainy. Saingy tsy misy afaka hahatakatra sary feno momba ny fisian'Andriamanitra.
Somary nahakivy ny tsy fahaizany hahatakatra ny fahafenoan'Andriamanitra, dia namarana ny fitantarany ny amin'ny fiainan'i Jesosy tamin'ny teniny i Jaona: "Misy zavatra maro hafa izay nataon'i Jesosy. Fa raha ny iray kosa tokony hosoratana. noho izany dia mihevitra aho fa tsy hahatakatra an'izao tontolo izao ireo boky tokony hosoratana " (Jaona 21:25).
Raha fintinina, ny Baiboly dia maneho amin'Andriamanitra
• tsy mandeha samirery
• tsy fehezina amin'ny fotoana rehetra
• tsy fehezina amin'ny fetra malalaka
• Mahery indrindra
• tsy manam-petra
• transcendent (mijoro eo ambonin'izao rehetra izao)
• tsy misy dikany (miombon-kevitra amin'izao rehetra izao).
Fa inona marina moa Andriamanitra?
Nisy profesora ara-pinoana indray mandeha nanandrana hanome ny mpihaino azy handinika bebe kokoa an'Andriamanitra. Niangavy ireo mpianatra ny hamaky tanana amin'ny faribolana lehibe sy hanakimpy ny mason'izy ireo. "Ankehitriny milamina ary alao an-tsaina hoe Andriamanitra", hoy izy. "Miezaha sary an-tsaina ny bika aman'endriny, ny toeran'ny seza fiandrianany, ny feo mety ho lo, ny zava-mitranga manodidina azy." Rehefa nikatona ny mason'izy ireo, nipetraka teny an-tànana ireo mpianatra dia nipetraka teo amin'ny sezany nandritra ny fotoana ela nanonofy ny sarin 'Andriamanitra. "Tsara ihany va?" nanontany ny mpampianatra. "Mahita azy ve ianao? Tokony samy hanana sary ao an-tsaina ny tsirairay avy aminao. Nefa," hoy hatrany ny profesora, "tsy Andriamanitra izany!" "Tsia!" nesoriny tamin'ny heriny izy. "Tsy Andriamanitra izany! Tsy afaka hahatakatra azy tanteraka amin'ny saintsika isika! Tsy misy olona afaka mahatakatra an-tsakany sy an-davany satria Andriamanitra dia Andriamanitra ary olombelona ihany ary voafetra ihany isika." Fampahalalana lalina be.
Fa maninona no sarotra be ny mamaritra an'iza sy iza Andriamanitra? Ny sakana lehibe indrindra dia ao anatin'ny fetra voalazan'ity mpampianatra ity: Ny zavatra rehetra niainany dia namboarin'ireo olona tamin'ny alàlan'ny fahatsiarovan'izy dimy, ary ny fifandraisanay amin'ny fiteny rehetra dia mifamatotra aminy. Mifanohitra amin'izany kosa, Andriamanitra mandrakizay. Tsy manam-petra izy. Tsy hita maso. Saingy afaka manao fanambarana misy heviny momba an'Andriamanitra isika, na dia voafetra ihany aza isika.
Zava-misy ara-panahy, fitenin'olona
Maneho ny tenany tsy mivantana amin'ny fahariana Andriamanitra. Efa niditra an-tsehatra eo amin'ny tantaran'ny tontolo izao izy. Ny teniny, ny Baiboly, dia milaza amintsika bebe kokoa momba azy. Niseho tamin'ny fomba sasany tao amin'ny Baiboly tamin'ny olona sasany koa izany. Na dia izany aza, Andriamanitra dia fanahy, ny fahafenoany dia tsy azo jerena, tsapa, fofona. Manome antsika fahamarinana momba ny foto-kevitr'Andriamanitra ny Baiboly mampiasa teny izay azon'ny olombelona takarina amin'ny tontolo iainany. Ireo teny ireo anefa dia tsy afaka manome taratra tanteraka an'Andriamanitra.
Antsoin'ny Baiboly hoe "vatolampy" sy "lapa" ny Baiboly. (Salamo 18: 3) "Shiela" (Salamo 144: 2), “mandevona” (Hebreo 12:29). Fantatsika fa tsy mifanitsy amin'ireto zavatra ara-batana ireto Andriamanitra. Ireny famantarana ireny dia, mifototra amin'ny zavatra tsy takatry ny zanak'olombelona ary takatry ny saintsika, mitondra antsika amin'ny lafiny lehibe amin'Andriamanitra.
Ny Baiboly aza dia manondro endrika an'Andriamanitra amin'ny endriny iray izay mampiseho ny toetrany sy ny fifandraisany amin'ny olona. Ny toerana dia mamaritra ny Andriamanitra iray (Filipiana 3:21); lohany sy volo (Apokalypsy 1:14); tarehy (Genesisy 1:32; Eksodosy 31:2; Apokalypsy 33:23); Maso sy sofina (Deoteronomia 5:11; Salamo 12:34; Apokalypsy 16:1); orona (Genesisy 1:8; Eksodosy 21: 2); vava (Matio 4: 4; Apokalypsy 1:16); molotra (Joba 11: 5); feon'ny (Salamo 68:34; Apokalypsy 1:15); Lava sy fofonaina (Isaia 30: 27-28); Soavaly, tanana ary rantsan-tanana (Salamo 44: 3-4; 89:14; Hebreo 1: 3; Eksodosy 2:18; Eksodosy 18:2; Deoteronomia 31:18; Salamo 5: 9; Apokalypsy 10:8); -tsorony (Isaia 9: 5); tratra (Apokalypsy 1:13); indray (Eksodosy 2:33); andilany (Ezekiela 1:27); feet (Salamo 18:10; Apokalypsy 1:15).
Matetika rehefa miresaka momba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika dia mampiasa fiteny nalaina tamin'ny fiainam-pianakaviana ny Baiboly. I Jesoa mampianatra antsika hivavaka: "Rainay any an-danitra!" (Matio 6:9). Tian'Andriamanitra hampionona ny olony toy ny reny mampionona ny zanany (Isaia 66:13). Jesosy dia tsy menatra miantso ireo voafidin'Andriamanitra ho rahalahiny (Hebreo 2:11); izy no lahimatoany, lahimatoa (Romana 8: 29). Ao amin'ny Apôk. 21: 7, dia mampanantena Andriamanitra hoe: "Izay maharesy no handova ny zavatra rehetra, ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho zanako." Eny, Andriamanitra dia miantso ny kristiana hanana fatoram-pianakaviana miaraka amin'ny zanany. Ny Baiboly dia milazalaza izany fatorana izany amin'ny fahatakarana azon'ny olombelona takarina. Mandoko ny sarin'ny zava-misy ara-panahy avo indrindra azo antsoina hoe impressionisme izy. Izany dia tsy manome antsika ny feno ny fiainana ara-panahy be voninahitra amin'ny ho avy. Ny fifaliana sy voninahitry ny fifandraisana faratampony amin'ny maha-Zanany dia lehibe lavitra noho ny voalazan'ny voambolana voafetra ananantsika. Ka hoy ny 1 Jaona 3: 2 amintsika: "Ry malala, efa zanak'Andriamanitra sahady isika; nefa tsy mbola naseho izay ho toetrantsika. Nefa fantatsika fa rehefa haseho, dia hitovy aminy isika, satria hahita azy tahaka azy izao. " Amin'ny fitsanganana amin'ny maty, rehefa tonga ny fahafenoan'ny famonjena sy ny fanjakan'Andriamanitra, dia hahafantatra an'Andriamanitra "tanteraka" ihany isika amin'ny farany. "Izao dia mahita sary maizina amin'ny alàlan'ny fitaratra isika," hoy i Paul nanoratra, "fa avy eo nifanatrika. Ankehitriny dia fantatro tsikelikely; fa ho hitako ny fahafantarana ahy" (1 Korintiana 13: 12).
"Iza no mahita ahy, mahita ny dadany"
Araka ny hitantsika dia ny fanambarana avy amin'ny tenan'ny tena Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny famoronana, tantara ary soratra masina. Ankoatr'izay, Andriamanitra dia naneho ny tenany amin'ny olona amin'ny maha-olombelona tenany ihany koa. Lasa toa antsika izy ary niaina, nanompo sy nampianatra teo anivontsika. Ny fiavian'i Jesôsy dia fihetsika lehibe indrindra nataon'Andriamanitra. "Ary ny Teny dia tonga nofo (Jaona 1:14). Nahafoy ny tombontsoany masina i Jesosy ary tonga olombelona, ​​tonga olombelona tanteraka. Maty noho ny fahotantsika Izy, natsangana tamin'ny maty ary nandamina ny Fiangonany. Nanaitra ny olona tamin'ny androny ny fahatongavan'i Kristy. Nahoana? Satria ny endrik'Andriamanitra dia tsy dia lavitra loatra, araka ny ho hitantsika amin'ireo toko roa manaraka. Na eo aza izany, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: "Izay mahita ahy dia mahita ny Ray!" (Jaona 14:9). Raha fintinina: Andriamanitra dia naneho ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy.
3. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho
Jodaisma, Kristianisma, Silamo. Ireo fivavahana telo eto an-tany dia manondro an'i Abrahama ho ray. Tsy nitovy tamin'ny an'ireo niara-belona taminy i Abrahama tamin'ny fomba iray lehibe: Andriamanitra tokana no ivavahany - ilay Andriamanitra marina. Ny finoana tokana izay finoana fa misy Andriamanitra tokana dia manondro ny fiandohan'ny fivavahana marina.
Nivavaka tamin'ilay Andriamanitra marina i Abrahama fa tsy teraka tao amin'ny kolontsaina monotéistica i Abrahama. Taonjato maro taty aoriana, dia nampitandrina ny Isiraely taloha Andriamanitra hoe: "Ny razanao nonina teo amoron'ny ony Eofrates, Terach, Abrahama sy ny rain'i Nahor, ary nanompo andriamani-kafa. Koa dia nalaiko avy tany ampitan'ny renirano i Abrahama rainao ary namela azy nitety ny tany Kanana rehetra, Gender ... " (Josoa 24: 2-3).
Talohan'ny niantsoan'Andriamanitra azy dia nipetraka tao Ora i Abrahama; Mety nonina tao Harana ny razany. Maro ny andriamanitra nivavahana tamin'ny toerana roa. Tany Ur, ohatra, dia nisy ziggurat lehibe iray, natokana ho an'ny andriamanitra volana Sumerian Nanna. Nisy tempoly hafa tany Ur nanompo ny kolontsaina An, Enlil, Enki ary NingaL. Andriamanitra dia nandositra ity tontolon'ny finoana politisiana ity: "Mivoaha amin'ny tanindrazanao sy avy amin'ny havanao ary avy amin'ny tranon-drainao ho any amin'ny firenena iray izay tiako hasehoko anao. te hanao anao ho vahoaka lehibe ... " (Genesisy 1: 12-1).
Nankatò an'Andriamanitra i Abrahama ka lasa nandeha (Andininy 4). Raha ny hevitr'izany, ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'i Israely dia nanomboka tamin'io fotoana io: rehefa naneho ny tenany tamin'i Abrahama izy. Nanao fanekena tamin'i Abrahama Andriamanitra. Nanavao ny fanekena tamin'i Isaka, zanakalahin'i Abrahama izy, tat with aoriana, niaraka tamin'i Jakoba, zanakalahy Isaka. Nivavaka tamin Andriamanitra tokana sady marina i Abrahama, Isaka ary Jakoba. Tsy nampitovy azy ireo tamin’ny fianakaviany akaiky koa izany. Fantatr'i Labana, zafikelin'i Nahor, rahalahin'i Abrahama,, fa mbola andriamanitra trano (Sampy) (Genesisy 1: 31-30).
Andriamanitra dia mamonjy ny Isiraely amin'ny fanompoan-tsampy Egyptiana
Taona maro taty aoriana, Jakob (Israely nomena anarana) niaraka tamin'ny zanany tany Ejipta. Nijanona tany Ejipta nandritra ny taonjato maro ny zanak’Israely. Teo koa no nolazaina fa nanambady maro tany Ejipta. Ny encyclopedia ny Baiboly (Eltville 1990) nanoratra hoe: "Ny fivavahana [Egypt] dia fiangonan'ny fivavahana nomen'ny tsirairay, izay andriamanitra maro avy any ivelany (Baal, Astarte, the grotesque den) dingana tsy nifangaro momba ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny hevitra samy hafa izay nipoitra ... Tany an-tany, ireo andriamanitra dia nampidirina ho biby fantatry ny famantarana sasany " (P. 17-18).
Tany Egypt, nitombo isa ny zanak'israely saingy nianjera tamin'ny fanandevozan'ny Egyptiana. Andriamanitra dia niseho tamin'ny andiana fihetsika izay nitarika ny fanafahana ny Isiraely avy tany Egypta. Ary nanao fanekena tamin'ny firenen'ny Isiraely izy. Araka ny asehon'ireto fisehoan-javatra ireto, ny fanambaràn'Andriamanitra ny tenany tamin'ny olombelona dia nanjary monotheistic foana. Nanambara ny tenany tamin'i Mosesy ho Andriamanitr'i Abrahama, Isaka ary Jakoba izy. Ny anarana omeny ny tenany ("Izaho dia" na "Izaho", Eksodosy 2:3), dia milaza fa tsy misy andriamanitra hafa rehefa misy Andriamanitra. Andriamanitra dia. Tsy ianao!
Satria tsy te hanafaka ny Israelita i Farao, dia nampietry an'i Ejipta i Ejipta tamin'ny loza folo. Ny ankamaroan'ireny loza ireny dia mampiseho avy hatrany ny herin'ny andriamanitra Ejiptiana. Ohatra, ny iray amin'ireo andriamanitra Ejiptiana dia manana loha sahona. Ny fitsahonan'ny sahona dia mampihomehy ny fanahin'ity andriamanitra ity.
Na dia rehefa nahita ny loza mahatsiravina tamin'ny loza folo aza i Farao dia tsy nandefa ny Israelita. Avy eo dia nandrava ny tafika Egyptiana tao anaty ranomasina Andriamanitra (Genesisy 2: 14). Ity fihetsika ity dia mampiseho ny tsy manam-pahefana amin'ny andriamanitr'i Ejipta ny ranomasina. Hiran'ny triumphal (Eksodosy 2: 15-1), nidera an'Andriamanitry ny Tsitoha ny zanak'Israely.
Ilay tena Andriamanitra dia hita ka very indray
Avy tany Ejipta Andriamanitra no nitarika ny Isiraelita hatrany Sinay, izay nanisy tombo-kase fifanekena. Ao amin'ny voalohany amin'ireo didy folo dia nanantitrantitra Andriamanitra fa ny fiankohofana irery dia noho izy: "Aza manana andriamani-kafa afa-tsy Izaho" (Genesisy 2: 20). Tamin'ny andrana faharoa dia nandràra ny fanompoan-tsampy (Andininy 4-5). Imbetsaka i Mosesy no nampirisika ny Isiraelita tsy hiala amin'ny sampy (5. Mose 4:23-26; 7:5; 12:2-3; 29:15-20). Fantany fa ny Israelita dia halaim-panahy hanaraka ny andriamanitry ny Kananita rehefa tonga any amin'ny tany nampanantenaina izy ireo.
Ny anarana vavaka Sh'ma (Hebreo "Mihainoa!" Aorian'ny teny voalohany tamin'ity vavaka ity) dia nanambara ny faneken'ny Isiraely an'Andriamani-tra. Manomboka toy izao izany: "Mihainoa, ry Isiraely, ny Tompo no Andriamanitray, ny Tompo irery. Ary tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra" (Genesisy 5: 6-4). Na izany aza, imbetsaka ny Isiraely dia nandringana an'ireo andriamanitry ny Kananita, anisan'izany ny EI (anarana marika izay azo ampiharina ihany koa amin'ilay tena Andriamanitra), Bala, Dagon ary Asthoreth (anaran 'ny andriamanibavy Astarte na Ischtar). Ny kolontsain'ny Baal manokana indrindra dia manana fiangaviana mahatsiravina amin'ny Isiraelita. Rehefa manangona ny tany Kanana izy ireo dia miankina amin'ny fijinjana tsara. Bala, andriamanitry ny tafio-drivotra, no ivavahana amin'ny fambolena.
The International Standard Bible Encyclopedia: "Satria mifantoka amin'ny fitomboan'ny tany sy ny biby izy, dia tsy maintsy nahasarika ny fiaraha-monina toa an'i Israel taloha ny fambolena fiompiana" (Boky 4, p. 101).
Mampirisika ny Isiraelita ny mpaminanin'Andriamanitra hibebaka amin'ny fihemorana. Elia nanontany ny olona hoe: "Mandra-pahoviana ianareo no miraviravy etsy sy eroa? (1 Mpanjaka 18:21). Mamaly ny vavak'i Elia i Andriamanitra mba hanaporofoana fa Andriamanitra irery izy. Niaiky ny vahoaka hoe: "Iaveh no Andriamanitra, i Iaveh no Andriamanitra!" (Andininy 39).
Andriamanitra dia tsy manambara ny tenany ho lehibe indrindra amin'ny andriamanitra rehetra, fa Andriamanitra tokana: "Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra hafa" (Isaia 45:5). Ary: "Tsy nisy Andriamanitra natao talohako, ka tsy hisy hisy aoriako. Izaho dia Izaho no Jehovah, ary tsy misy Mpamonjy afa-tsy Izaho" (Isaia 43: 10-11).
Jodaisma - monotheistic hentitra
Ny fivavahana jiosy tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy helikista (miandrandra andriamanitra maro, fa ny mino ny lehibe indrindra) mbola monoiatric (mamela ny fivavahan'andriamanitra fotsiny, fa mihevitra ny hafa ho misy), fa monotéistika mafy (mino fa misy Andriamanitra tokana). Araka ny Rakibolana teolojia ao amin'ny Testamenta Vaovao, tsy nitovy tamin'ny zavatra ninoany an'Andriamanitra tokana ny Jiosy (Boky 3, p. 98).
Hatramin'izao, ny famerenan'ny shma dia ampahany lehibe amin'ny fivavahana jiosy. Rabi Akiba (Maty ho maritiora tamin'ny taonjato faha-2), izay voalaza fa novonoina nandritra ny vavaky ny Sh'ma, dia lazaina fa averina ao amin'ny fanaintainany 'Deoteronomia 5: 6 ary ny fofonaina farany miaraka amin'ny teny hoe "irery" nahavita.
Jesosy momba ny monotheism
Rehefa nanontany an ’i Jesosy ny mpisolovava iray hoe inona no didy lehibe indrindra, hoy ny navalin’ i Jesosy tamin ’ny teny notsongaina hoe:« Mihainoa, ry Isiraely, Tompontsika ny Tompo, irery ny Tompo, ary tiava ny Tompo Andriamanitrao amin ’ny fonao rehetra Ny fo sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra " (Marka 12: 29-30). Manaiky ilay mpitantsoratra hoe: "Tompoko, tena marina ny teninao! Iray ihany izy ary tsy misy hafa afa-tsy Izy ..." (Andininy 32).
Ao amin'ny toko manaraka dia ho hitantsika fa ny fahatongavan'i Jesôsy dia mihalalina sy manitatra ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Vaovao. I Jesosy dia nanambara fa Zanak'Andriamanitra ary tamin'ny iray miaraka amin'ny Ray. Jesosy dia manamafy ny fiharihary rajakoja. Ny Theological Dictionary of the New Testament dia manamafy fa: "Christology dia manamafy ny fankahalana kristiana tany am-boalohany, fa tsy ahontsina azy ... Araka ny filazalazana, na dia nampitombo ny fankatoavan'ny monotéisma aza i Jesosy" (Boky 3, p. 102).
Na ny fahavalon'i Kristy aza dia nanambara taminy hoe: "Tompoko, fantatray fa marina ary tsy mangataka olona na iza na iza, satria tsy manaja ny lazan'ny olona ianao, fa mampianatra ny lalan'Andriamanitra marina". (Andininy 14). Araka ny asehon'ny Soratra Masina dia i Jesosy no "Kristy an'Andriamanitra" (Lioka 9:20), "Kristy no voafidin'Andriamanitra" (Lioka 23:35). Izy dia "Zanak'ondrin'Andriamanitra" (Jaona 1:29) sy ny "Mofon'Andriamanitra" (Jaona 6:33). Jesosy, ny Teny dia Andriamanitra (Jaona 1:1). Angamba ilay fanambarana mazava kokoa momba an'i Jesosy dia hita ao amin'ny Marka 10: 17-18. Rehefa misy olona miresaka aminy "tompoko tsara" dia hoy ny navalin'i Jesosy: "Inona no antsoinao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery ihany."
Izay notorin'ny fiangonana voalohany
Nomen'i Jesosy ny fiangonany ny asa fitoriana ny filazantsara sy fanaovana mpianatra ny olona rehetra (Matio 28: 18-20). Noho izany, tsy ela izy dia nitory tamin'ny olona niforin'ny kolontsaina polytheistic. Rehefa nitory sy nanao fahagagana tany Lystra i Paoly sy i Barnabasy, ny fihetsik'ireo mponina dia namadika ny fomba fisainany feno fomba fiasa poletika: "Saingy rehefa nahita ny nataon'i Paoly ny olona dia nanandratra ny feony izy ary niantsoantso tamin'ny fomba:" Ny andriamanitra dia nitovy tamin'ny olona ary midina et us aminay, dia nantsoin'i Barnabasy Zeus sy Paulus Hermes izy ... " (Asan’ny Apostoly 14: 11-12). Hermes sy Zeus dia andriamanitra roa avy amin'ny pantheon grika. Na ny panty grika sy romanina dia fantatra tao amin'ny tontolon'ny Testamenta Vaovao, ary niroborobo ny fivavahan'ireo andriamanitra grika-romanina. I Paul sy Barnabasy dia namaly tamim-pitiavana hoe: "Izahay dia olona mety maty toa anao ihany koa ary mitory aminao ny filazantsara fa tokony hiovaina amin'ireto andriamanitra sandoka ireto ianao, dia Andriamanitra, lanitra sy tany ary ranomasina ary izay rehetra ao aminy. manana " (Andininy 15). Na izany aza, tsy zakany ny nanakana ny olona tsy hanao sorona aminy.
Tany Atena dia nahita alitara maro andriamanitra samihafa - dia alitara misy ny fanokanana "Ho an'andriamanitra tsy fantatra" (Asan’ny Apostoly 17:23). Nentiny ho "hanger" ho an'ny ateniana ny alitaran'io alitara io. Tany Efesosy, ny kolotsaina Artemis (Diana) dia niaraka tamin'ny varotra niaro ny sarin'ny andriamanitra. Rehefa nitory ilay hany tena Andriamanitra marina i Paoly, dia nihena io varotra io. Demetriosa mpanefy volamena, izay nijaly vokatr'izany dia nitaraina fa "ity Paul ity dia mandany hery feno, mandresy lahatra ary miteny: Ny zavatra vita amin'ny tanana dia tsy andriamanitra" (Asan’ny Apostoly 19:26). Ary ny mpanompon'Andriamanitra indray mandeha dia mitory ny maha-ratsy ny sampy nataon'olombelona. Tahaka ny taloha ihany, ny Testamenta Vaovao iray dia manambara tena Andriamanitra tokana. Ny andriamanitra hafa dia tsy.
Tsy andriamanitra hafa
Malina sy mazava, hoy i Paoly tamin'ireo Kristiana tany Korinto fa fantany "fa tsy misy sampy amin'izao tontolo izao ary tsy misy Andriamanitra tokana" (1 Korintiana 8: 4).
Ny monotheism dia mamaritra ny tranainy ho testamenta vaovao. I Abrahama, rain'ny mpino, dia niantso an'Andriamanitra avy amin'ny fiaraha-monina polytheistic. Andriamanitra dia naneho ny tenany tamin'i Mosesy sy ny Isiraely ary nanorina ny fanekena taloha tamin'ny fiankohofana irery, dia nandefa mpaminany izy mba hanamafisana ny hafatry ny monotheism. Ary farany, Jesosy tenany mihitsy no nanamafy ny fankahalana olona. Ny fiangonan'ny Testamenta Vaovao dia naoriny hatrany mba hiady amin'ny finoana izay tsy maneho ny fankahalana monotheism. Hatramin'ny andron'ny Testamenta Vaovao, dia nitory foana ny Fiangonana izay nambaran'Andriamanitra hatry ny ela: iray ihany no Andriamanitra, "ny Tompo irery".
4. Andriamanitra, nambara tamin'i Jesosy Kristy
Ny Baiboly dia mampianatra hoe: "Iray ihany ny Andriamanitra". Tsy roa, telo na arivo. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ny kristianisma dia fivavahana monotheistic, araka ny hitantsika tao amin'ny toko fahatelo. Izany no mahatonga ny fahatongavan'i Kristy hiteraka fahatsapana toy izany.
"Manelingelina ny Jiosy ..."
Tamin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, tamin'ny alàlan'ny "taratry ny voninahiny sy ny endriny", dia nanambara ny tenany tamin'ny olombelona Andriamanitra (Hebreo 1:3). Jesosy dia niantso an'i Jesosy rainy (Matio 10: 32-33; Lioka 23:34; Jaona 10:15) ary hoy izy: "Izay mahita ahy dia hahita ny Ray!" (Jaona 14:9). Izy no nanao ilay fitakiana sahy: "Izaho sy ny ray dia iray ihany" (Jaona 10:30). Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia niresaka taminy i Tomasy niaraka tamin'ny "Tompoko sy Andriamanitro!" (Jaona 20:28). Jesosy Kristy dia Andriamanitra.
Tsy afaka nandray izany ny Jodaisma. "Ny Tompo dia Andriamanitsika, ny Tompo irery" (Deoteronomia 5: 6); io fehezanteny io avy amin'ny Shma dia efa ela no niorenan'ny finoana jiosy. Saingy tonga teo ny lehilahy iray nanana fahalalana lalina ny soratra masina sy hery mahagaga izay nilaza fa zanak'Andriamanitra. Nisy mpitondra jiosy nanaiky azy ho mpampianatra avy amin'Andriamanitra (Jaona 3:2).
Fa zanak'Andriamanitra ve? Ahoana no maha-Andriamanitra tokana sady ray? "Izany no nahatonga ny Jiosy hitady hamono azy bebe kokoa", hoy ny Jaona 5:18, "satria tsy vitan'ny hoe nanimba ny Sabata ihany izy, fa nilaza koa fa Andriamanitra dia rainy." Tamin'ny farany, ny Jiosy dia nanasazy azy ho faty satria efa niteny ratsy teo imasony izy: "Dia nanontany azy indray ny mpisoronabe ary nanao taminy hoe: Ianao va no Kristy, ilay zanaky ny mendrika indrindra? Fa hoy Jesosy: Izaho ity; ary ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny Hery ary ho avy miaraka amin'ny rahon'ny lanitra. Avy eo dia nandriatra ny akanjony ny mpisoronabe ary nanao hoe: Inona no ilaintsika vavolombelona? Efa naheno fitenenan-dratsy ianao. Ahoana ny fitsarana anao? Fa samy nomelohina ho faty avokoa izy rehetra " (Marka 14: 61-64).
"... sy hadalana amin'ny Grika"
Fa na ny Grika tamin'ny andron'i Jesôsy aza dia tsy afaka nanaiky ny fanambaran'i Jesosy. Tsy nisy na inona na inona, resy lahatra izy, izay nahavita namindra ny elanelana misy eo amin'ny mandrakizay tsy azo ovana sy ny fitaovana mandalo. Ary dia nihomehy an'io fanambarana lalina nataon'i John io ny Grika: "Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny Teny dia ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no Teny ... Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina teo amintsika, ary hitanay ny voninahiny. "voninahitra ho anaka zanaka lahitokan'ny rainy, feno fahasoavana sy fahamarinana" (Jaona 1: 1, 14). Tsy ampy ny tsy mampino amin'ny tsy mpino. Tsy vitan'ny hoe tonga olombelona sy maty Andriamanitra, fa natsangana tamin'ny maty koa izy ary niverina indray ny voninahiny taloha (Jaona 17:5). Nanoratra ho an'ny Efesianina ny apostoly Paoly fa "nanangana an'i Kristy tamin'ny maty Andriamanitra ary nametraka azy eo amin'ny ankavanany any an-danitra" (Efesiana 1:20).
Niresaka mazava momba ny fahasosoran'i Jesosy Kristy tamin'ny Jiosy sy ny Grika i Paoly: "Satria satria izao tontolo izao, voahodidin'ny fahendren'Andriamanitra, dia tsy nahalala an'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fahendreny, dia sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ilay toriteny tamin'ny alalany. minoa izany, satria ny Jiosy mangataka famantarana, ary ny Grika mangataka fahendrena, nefa izahay kosa mitory ilay Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, fanakorontanana ny Jiosy ary fahadalana an'ny Grika " (1 Korintiana 1: 21-23). Ny voantso ihany no afaka mahalala sy miarahaba ireo vaovao mahafaly amin'ny filazantsara, hoy i Paoly; "Ho an'ireo izay voantso, Jiosy sy Grika, dia mitory an'i Kristy ho herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra isika. Fa ny fahendren'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona." (Andininy 24-25). Ary ao amin'ny Romana 1:16, i Paul dia niantso hoe: "... tsy menatra ny filazantsara aho, satria herin'Andriamanitra izay mahatonga ny olona rehetra mino azy, sambatra ny Jiosy aloha sy ny Grika."
"Izaho no varavarana"
Nandritra ny fiainany teto an-tany, i Jesosy, ilay Andriamanitra tonga nofo, dia nandriaka ny tranainy taloha, malalany - saingy diso - hevitra momba ny atao hoe Andriamanitra, ny fomba anomezana an 'Andriamanitra ary ny sitrapony. Nohazavainy ny fahamarinana izay tsy voamarika tamin'ny Testamenta Taloha fotsiny. Ary vao avy nampahafantariny izany
Azo atao ny famonjena.
"Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana", hoy izy, "tsy misy olona tonga amin'ny ray fa amin'ny alalako" (Jaona 14:6). Ary: "Izaho no voaloboka, ianareo no voaloboka. Izay mijanona ato amiko ary izaho ao aminy, dia afa-mandositra be; fa raha tsy amiko dia tsy mahavita na inona na inona ianareo. Izay tsy miray amiko dia ariana tahaka ny voaloboka sy malazo. ary angoninao sy atsipy anaty afo izy ireo dia tokony hodorana " (Jaona 15: 5-6). Hoy izy taloha: "Izaho no varavarana; raha misy olona miditra amiko, dia hovonjena ..." (Jaona 10:9).
Jesosy dia tsy nanadino ny maha-zava-dehibe ny monotheistic izay miresaka ao amin'ny Deoteronomia 5: 6 ary miantso ao amin'ny Testamenta Taloha izany. Mifanohitra amin'izany, ny fomba hanafoanana ny lalàna, fa hanitatra izany (Matio 5: 17, 21-22, 27-28), manitatra ny foto-kevitr'Andriamanitra "tokana" amin'ny fomba tsy ampoizina izy. Nohazavainy hoe: Hafa ihany ny Andriamanitra, fa ny Teny dia niaraka tamin'Andriamanitra mandrakizay (Jaona 1: 1-2). Tonga nofo ny Teny - olona rehetra sy Andriamanitra rehetra tamin'ny fotoana iray - ary nandà ny tombontsoany rehetra izy. Jesosy, "izay nitovy endrika tamin'Andriamanitra, dia tsy nihevitra azy io ho fandrobana mba hitovy amin'Andriamanitra, fa naneho ny tenany ary naka endrika endrika mpanompo, tonga tahaka sy nitovy tamin'ny olombelona
Toa fantatra amin'ny maha-olombelona azy. Nanetry tena izy ary nankatò hatramin'ny fahafatesana, eny hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana " (Filipiana 2: 6-8).
Jesosy dia olombelona ary Andriamanitra rehetra. Nandidy ny herin ’Andriamanitra rehetra sy ny fahefana rehetra Izy, saingy nanaiky ny fetran’ny mety ho olona hahazoana aina amintsika. Nandritra io vanim-potoana nitondrana azy io, ny zanany dia nijanona ho "iray" niaraka tamin'ny rainy. "Izay mahita ahy dia mahita ny raiko!" hoy Jesosy (Jaona 14:9). "Tsy afaka manao na inona na inona amin'izay ataoko aho. Reko fa mitsara aho, ary marina ny fitsarako, satria tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapon'izay naniraka ahy." (Jaona 5:30). Nilaza izy fa tsy manao zavatra momba ny tenany, fa niresaka toy ny nampianarin'ny rainy azy (Jaona 8:28).
Fotoana fohy talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia nohazavainy tamin'ny mpianany hoe: "Avy tamin'ny Ray aho ary tonga amin'izao tontolo izao; miala eto amin'izao tontolo izao aho ary mankany amin'ny Ray" (Jaona 16:28). Tonga teto an-tany Jesosy mba ho faty noho ny fahotantsika. Tonga izy nahita ny fiangonany. Tonga Izy mba hanomboka ny fitoriana eran'izao tontolo izao. Izy koa dia tonga mba hampahafantatra an'Andriamanitra amin'ny olona. Indrindra indrindra, nampahafantariny ny olona ny fifandraisan'ny ray-zanakalahy izay misy ao amin'ny andriamanitra.
Ny Filazantsaran’i Jaona, ohatra, dia mandinika lavitra be ny fomba nanambaran’i Jesosy ny Ray tamin’ny olombelona. Ny lahatenin'i Jesosy tamin'ny Paska dia mahaliana indrindra amin'ity lafiny ity (Jaona 13-17). Fahalalana mahatalanjona ny toetran'Andriamanitra! Ny mahagaga koa dia ny fanambarana fanampiny nataon'i Jesosy momba ny fifandraisan'Andriamanitra amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny olombelona dia afaka mandray anjara amin'ny natiora! Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: "Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy izay tia ahy; fa izay tia ahy no tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia azy sy maneho ny tenako aminy" (Jaona 14:21). Tian'Andriamanitra hampifangaro ny olona amin'ny alàlan'ny fifankatiavana - fitiavana ilay karazana iray izay manjaka eo amin'ny ray sy ny zanaka. Manambara ny tenany amin'ny olona izay miasa ity fitiavana ity. Nanohy i Jesosy hoe: "Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ny Raiko ho tia azy, ary isika manatona azy ka hiara-mitoetra aminy. Fa izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko. Ary ny teny, izay renareo dia tsy ny teniko fa ny an'ny Ray izay naniraka ahy
manana " (Andininy 23-24).
Izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia manolotra ny fiainany amim-pahatokiana amin'Andriamanitra, fa velona ao amin'Andriamanitra. Dia nitory i Petera hoe: "mibebaha, ary samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy ho famelan-keloka, ary hahazo ny fanomezana ny Fanahy Masina ianao" (Asan’ny Apostoly 2:38). Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra ihany koa, araka ny ho hitantsika ao amin'ny toko manaraka. Fantatr'i Paoly fa mitoetra ao aminy Andriamanitra: "efa nohomboana niaraka tamin'i Kristy aho. tia sy nanolo-tena ho ahy izy » (Galatiana 2:20).
Ny fiainan'Andriamanitra ao amin'ny olona dia tahaka ny "fahaterahana vaovao", araka ny nohazavain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 3: 3. Amin'izany fahaterahana ara-panahy izany dia manomboka fiainana vaovao ao amin'Andriamanitra, lasa mpiray tanindrazana sy naman'Andriamanitra (Efesiana 2:19). Nanoratra i Paoly fa "namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina" Andriamanitra ary "nametraka antsika ao amin'ny fanjakan'ny Zanany malala izay misy famonjena, dia ny famelan-keloka" (Kolosiana 1: 13-14). Ny kristiana dia olom-pirenena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. «Ry malala, efa zanak’Andriamanitra isika» (1 Jaona 3:2). Nanambara tanteraka ny tenany tao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra. "Satria mitoetra ao aminy ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra" (Kolosiana 2: 9). Inona no hevitr'io fanambarana io amintsika? Afaka ny ho tonga mpiara-miombon'antoka amin'ny toetra araka an'Andriamanitra isika
Manintona ny famaranan-teny i Peter: "Izay rehetra manompo ny fiainana sy ny toe-panahy dia manome antsika ny fahefany amin'ny alalàn'ny fahalalana an'izay niantso antsika tamin'ny voninahitra sy ny heriny. Izy ireo dia manome anay ireo fampanantena faran'izay lafo sy lehibe indrindra, mba hahafahanao mizara amin'ny toetra araka an'Andriamanitra izay nandosiranao tamin'ny faniriana manimba izao tontolo izao. " (2 Petera 1: 3-4)
Kristy - fanambarana tonga lafatra nomen'Andriamanitra
Hatraiza marina no nanehoan'Andriamanitra manokana ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy? Tamin'izay rehetra eritreretiny sy notanterahiny dia nasehon'i Jesosy ny toetran'Andriamanitra. Jesosy dia efa natsangana ary natsangana tamin'ny maty mba hahafahan'ny olona ho voavonjy sy mihavana amin'Andriamanitra ary hahatratra ny fiainana mandrakizay. Milaza amintsika ny Romana 5: 10-11 hoe: "Fa raha efa nampihavana tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalontsika, mainka moa fa ho voavonjy amin'ny fiainany isika rehefa avy mihavana ankehitriny, saingy tsy irery fa koa, izahay koa dia manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Henn Jesosy Kristy, izay nahazoantsika fihavanana ankehitriny. "
Nasehon'i Jesosy ny fikasan'Andriamanitra hanangana fiaraha-monina ara-panahy vaovao manerana ny fetra sy ny firenena - ny Fiangonana (Efesiana 2: 14-22). Nasehon'i Jesosy ho Rain'ny rehetra izay nateraka indray ao amin'i Kristy. Jesosy dia nanambara ny tanjona be voninahitra nampanantenain'Andriamanitra ny olony. Ny fisian'ny Fanahin'Andriamanitra ao anatintsika dia efa manome tombotsoa mialoha an'io voninahitra hoavy io. Ny fanahy dia "fanomezan'ny lovantsika" (Efesiana 1:14).
Jesosy koa dia nijoro ho vavolombelona momba ny fisian'ny Ray sy ny Zanaka ho Andriamanitra ary noho izany ny fisian'ireo singa manan-danja samihafa dia aseho ao amin'ny Andriamanitra Iray mandrakizay. Ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Taloha dia namerimberina anaran'Andriamanitra hatrany amin'ny anaran'i Kristy. Ny fanatanterahana izany dia tsy vitan'ny hoe nanambara taminay ny maha-tahaka an'i Kristy izy ireo, fa misy ihany koa ny toetran'Andriamanitra, satria i Jesosy dia fanambarana ny Ray, ary izy sy ny Ray dia iray ihany. Mianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra isika rehefa mandinika hoe manao ahoana ny an'i Kristy.
5. Iray ao amin'ny telo ary telo ao anatin'ny iray
Ny fampianaran Andriamanitra, araka ny hitantsika, dia maneho ny Baiboly tsy mahomby. Ny Fahatongavan'i Jesôsy sy ny asan'i Jesosy dia nanome antsika fahatakarana lalindalina kokoa amin'ny "fomba" ny maha-Andriamanitra. Ny Testamenta Vaovao dia manaporofo fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra ary Andriamanitra ny Ray. Saingy, arakaraky ny ho hitantsika dia maneho ny Fanahy Masina ho Andriamanitra - amin'ny maha-Andriamanitra, ary maharitra mandrakizay. Midika izany: Ny Baiboly dia manambara Andriamanitra izay misy mandrakizay amin'ny maha Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Noho izany antony izany dia tokony hatao batisa "amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Matio 28:19).
Nandritra ny taonjato maro dia maro ireo modely fanazavana isan-karazany no nipoitra izay mety hampahafantatra kokoa ireo zava-misy ara-Baiboly ireo raha vao jerena. Fa mila mitandrina isika tsy hanaiky ireo fanambarana fa "amin'ny alàlan'ny varavarana aoriana" dia mandika ireo fampianarana ara-baiboly. Satria ny fanazavana sasany dia mety hanatsotra ilay raharaha satria tsy manome sary an'Andriamanitra sy azo tsapain-tanana kokoa izany. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny fanazavana iray dia mifanaraka amin'ny baiboly ary tsy tsia raha mahonon-tena sy tsy miovaova. Ny Baiboly dia mampiseho fa iray ihany - iray ihany - Andriamanitra ary mbola manolotra antsika amin'ny fotoana mitovy Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, efa misy mandrakizay sy manatanteraka ny zava-drehetra izay hany Andriamanitra afaka manao.
"Ny iray amin'ny telo", "telo amin'ny iray" dia hevitra mifanohitra amin'ny lojika. Ohatra, mety ho mora kokoa ny mieritreritra ny hoe Andriamanitra iray "avy amin'ny loharano tokana", tsy "mampisaraka" amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy ilay Andriamanitry ny Baiboly izany. Ny sary tsotra iray koa dia ny "Andriamanitra Fianakaviana", izay ahitana mpikambana iray mahery. Saingy ny andriamanitry ny Baiboly dia tsy mitovy amin'ny zavatra rehetra azontsika namboarina tamin'ny fisainantsika manokana ary tsy misy fanambarana.
Manambara zavatra momba ny tenany Andriamanitra, ary mino azy ireo isika, na dia tsy afaka manazava azy rehetra aza isika. Ohatra, tsy azontsika atao ny manazava ny fomba maha-Andriamanitra raha tsy misy fiandohana. Ny hevitra toy izany dia mihoatra ny faravodilanitra voafetra. Tsy haintsika ny manazava azy io fa fantatsika fa tsy nisy fiandohana Andriamanitra. Manambara ihany koa ny Baiboly fa iray ihany ny Andriamanitra, fa iray ihany koa ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.
Ny Asa 5: 3-4 dia miantso ny Fanahy Masina hoe "Andriamanitra": "hoy i Piera hoe" Hananias, nahoana i Satana no nameno ny fonao fa nandainga tamin'ny Fanahy Masina ianao ary tsy nitana ny vola sasany ho any an-tsaha? Tsy hanana ny saha ve ianao? mba hahafahanao mihazona azy rehefa manana azy ianao? Ary rehefa amidy aminao dia tsy vitanao ny manao izay tianao? Nahoana ianao no nikasa hanao izany tao am-ponao? Nandainga tamin'Andriamanitra ianao fa tsy olona. " Mandainga amin'Andriamanitra ny lainga nataon'i Hananias, araka ny filazan'i Peter.
Ny toetra vaovao dia manondro ny Fanahy Masina izay ananan'Andriamanitra irery ihany. Ohatra, tsy manam-pahalalana ny Fanahy Masina. "Fa Andriamanitra dia nanambara izany tamin'ny alàlan'ny Fanahiny; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, anisan'izany ny halalinan'Andriamanitra" (1 Korintiana 2: 10).
Ankoatr'izay, ny Fanahy Masina dia manavaka, tsy fehezin'ny fetra. "Sa tsy fantatrao fa tempolin'ny Fanahy Masina izay ao anatinao ny vatanao ary avy amin'Andriamanitra ianao ary tsy avy amin'ny tenanao?" (1 Korintiana 6:19). Mipetraka amin'ny mpino rehetra ny Fanahy Masina ary noho izany dia tsy voafetra amin'ny toerana iray. Manavao ny kristiana ny Fanahy Masina. "Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy ... Ny rivotra no rivotra. na aiza na aiza tiany, ary maheno tsara ny fihodinanany izy, nefa tsy fantatrao hoe avy aiza izy sy izay alehany. Tsy misy hafa amin'ny olon-drehetra ateraky ny fanahy " (Jaona 3: 5-6, 8). Maminany mialoha ny ho avy izy. "Fa ny Fanahy kosa milaza mazava fa tato ho ato izay ny sasany dia hialana amin'ny finoana ary hifanaraka amin'ny fanahy mamitaka sy ny fampianarana devoly." (1 Timoty 4: 1). Ao amin'ny fomba fanaovana batemy, ny Fanahy Masina dia apetraka amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny ray sy ny zanaka: ny kristiana dia tokony hatao batisa "amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Matio 28:19). Ny saina dia afaka mamorona avy amin'ny tsy misy (Salamo 104:30). Andriamanitra irery no manana fanomezam-pahariana toy izany. Ny Hebreo 9:14 dia manome ny fanahy hoe "mandrakizay" amin'ny fanahy. Andriamanitra irery no maharitra mandrakizay.
Jesosy dia nampanantena ny apostoly ho "mpionona" taorian'ny nialanany (Fanampiana) hiaraka aminao "mandrakizay", ilay "fanahin'ny fahamarinana tsy azon'izao tontolo izao tsy azon'izao tontolo izao, satria tsy ahita izany ary tsy fantany. Fantatrao izany, satria mijanona ao aminao ary ho sitrana ho ao aminao » (Jaona 14: 16-17). Jesosy dia nohazavaina mazava io "mpananatra io dia ny Fanahy Masina:" Fa ny mpampionona, ny fanahy masina, izay halefan-draiko amin'ny anarako, dia hampianatra anao ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anao ny zavatra rehetra nolazaiko taminao " (Andininy 26). Ny Comforter dia mampiseho an'izao tontolo izao ny fahotany ary mitarika antsika amin'ny fahamarinana rehetra; ny asa rehetra izay Andriamanitra irery no mahavita azy. Nanamafy izany i Paoly: "Izahay koa dia miresaka momba izany, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olombelona, ​​fa amin'ny , ampianarin'ny Fanahy, handika ny hevitry ny fanahy amin'ny ara-panahy " (1 Korintiana 2:13, Baiboly Elberfeld).
Ray, Zanaka ary Fanahy Masina: Iray Andriamanitra
Rehefa takatsika fa iray ihany ny Andriamanitra ary Andriamanitra ny Fanahy Masina, toa ny Ray dia Andriamanitra ary ny Zanaka dia Andriamanitra, tsy sarotra amintsika ny mahatakatra andalan-tsoratra masina toa ny Asan’ny Apostoly 13: 2: "Fa kosa ny Tompo Nanompo sy nifady hanina, hoy ny Fanahy Masina: Atokào amin'i Barnabasy sy Saoly aho noho ny asa izay niantsoako azy ireo. "Araka ny filazan'i Lioka, hoy ny Fanahy Masina:" Atokàny amin'i Barnabasy sy Saoly aho ho amin'ny asa izay niantsoako azy ireo. I Lioka dia mahita mivantana amin'ny asan'ny Fanahy Masina ny asan'Andriamanitra.
Raha mandray ny fanambarana ara-Baiboly mikasika ny toetran'Andriamanitra isika dia tsara izany. Rehefa miteny sy mandefa, manome aingam-panahy, mitarika, manamasina, manome hery, na manome fanomezana, ny Fanahy Masina, dia Andriamanitra no manao izany. Saingy satria iray ihany ireo tsy mitovy Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia tsy Andriamanitra mahaleo tena izay miasa ho azy.
Manana sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'ny Ray, izay mitovy amin'ny sitrapon'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy eo amin'ny andriamanitra roa na telo no manapa-kevitra samirery fa mifanaraka tsara hatrany. Andriamanitra kosa izy io
sy ny sitrapo. Ny Zanaka dia manambara ny sitrapon'ny Ray Noho izany, io no toetra sy asan'ny Fanahy Masina hanatanterahana ny sitrapon'ny Ray eto an-tany.
Araka ny voalazan'i Paoly dia ny "Tompo no Fanahy" ary izy nanoratra ny "Tompo izay Fanahy" (2 Korintiana 3: 17-18). Ao amin'ny andininy 6 dia milaza mihitsy hoe "Ny Fanahy no mamelona anao," izay zavatra azon'Andriamanitra atao ihany. Ny Ray ihany no fantatsika satria ny Fanahy no ahafahantsika mino fa Jesosy dia Zanak'Andriamanitra. Jesosy sy ny Ray dia mitoetra ao anatintsika, saingy noho ny Fanahy no mitoetra ao amintsika (Jaona 14: 16-17, 23; Romana 8: 9-11). Satria iray ihany Andriamanitra, ny Ray sy ny Zanaka ato amintsika, rehefa ao amintsika ny Fanahy.
Ao amin'ny 1 Korintiana 12: 4-11, i Paoly dia mampitaha ny Fanahy, ny Tompo sy Andriamanitra amin'ny tsirairay. Izy io dia "Andriamanitra izay miasa amin'ny olona rehetra", manoratra izy ao amin'ny andininy faha-6. Fa ny andininy vitsivitsy fanampiny dia milaza fa: "Nefa izy rehetra dia iray ihany no fanahy iray", izany hoe "araka ny tadiavin'ny [fanahy]." Ahoana no anirian'ny saina? Amin'ny maha-Andriamanitra. Ary satria iray ihany Andriamanitra iray, ny sitrapon’ny ray dia ny sitrapon’ny zanakalahy sy ny Fanahy Masina koa.
Ny fiankohofana amin'Andriamanitra dia midika hoe hivavaka amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, satria iray ihany ireo Andriamanitra. Tsy afaka manantitrantitra ny Fanahy Masina isika ary manompo amin'ny maha-olona mahaleo tena antsika. Tsy ny Fanahy Masina toa izany fa Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Masindahy
Ny fivavahantsika dia ny hoe fanahy ao amin'ny iray. Andriamanitra ao amintsika (ny Fanahy Masina) manosika antsika hivavaka amin'Andriamanitra. Ny mpampionona (toa ny zanakalahy) tsy miresaka "ny azy" (Jaona 16:13), fa izay omen'ny rainy azy. Izy dia tsy manondro antsika ho azy, fa eo amin'ny ray amin'ny alàlan'ny zanany. Tsy mivavaka amin'ny Fanahy Masina toy izany koa isika - ny Fanahy ao anaty no manampy antsika hivavaka ary hanelanelana antsika ho antsika (Romana 8: 26).
Raha tsy Andriamanitra ao anatintsika dia tsy hiova finoana mandrakizay mihitsy isika. Raha tsy tao amintsika Andriamanitra, dia tsy ho Andriamanitra na Zanaka isika fantaro (izy). Izany no antony mahatonga antsika hahazo famonjena irery fa tsy ho antsika. Ny vokarintsika dia vokatry ny Fanahy Andriamanitra fa tsy ny antsika. Na eo aza izany dia ankafizintsika ny tombontsoa lehibe ahafahana mamela ny asan'Andriamanitra, raha tiantsika isika.
Ny ray no mpamorona sy loharanon'ny zavatra rehetra. Ny Zanaka no Mpanavotra, ny Mpamonjy, ny taova mpanatanteraka izay naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny Fanahy Masina no mpanafaka sy mpiaro. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra ao amintsika izay mitondra antsika mankany amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Zanaka. Nodiovina ary voavonjy ny zanakalahy mba hananantsika fiarahana aminy sy ny ray. Ny Fanahy Masina dia misy fiantraikany amin'ny fontsika sy ny saintsika ary mitarika antsika hino an'i Jesoa Kristy izay lalana sy vavahady. Ny Fanahy dia manome fanomezana, fanomezana avy amin'Andriamanitra, izay tsy isalasalana ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana.
Izany rehetra izany dia asan'ny Andriamanitra tokana izay manambara ny tenany amintsika ho Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Tsy misy Andriamanitra hafa Izy afa-tsy ilay Andriamanitry ny Testamenta Taloha, fa maro kokoa no nambara momba azy ao amin'ny Testamenta Vaovao: Naniraka ny zanany lahy ho faty izy noho ny fahotantsika ary natsangana ho amin'ny voninahitra, ka nandefa ny fanahiny - ilay mpampionona. - Izay mitoetra ao amintsika, dia mitari-dalana antsika ho amin'ny fahamarinana rehetra, manome fanomezana ary manitsy ny sarin'i Kristy.
Rehefa mivavaka isika dia ny hamaly ny vavaka ataontsika no tanjontsika; nefa tsy maintsy mitarika antsika amin'izany tanjona izany Andriamanitra, ary Izy aza no lalana hitondrana antsika amin'izany tanjona izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa: amin'Andriamanitra mivavaka (amin'ny ray) isika; Andriamanitra ao amintsika (ny Fanahy Masina) no mahatonga antsika hivavaka; ary Andriamanitra no lalana (ilay zanakalahy) hitondrana antsika amin'izany tanjona izany.
Manomboka ny drafitry ny famonjena ny ray. Ny zanakalahy dia mirakitra ny drafitry ny fampihavanana sy ny fanavotana ny zanak'olombelona ary hanatanteraka izany. Mitondra fitahiana ny Fanahy Masina - fanomezam-pahasoavana - famonjena, izay mitondra famonjena ny mpino mahatoky. Izany rehetra izany dia asan'andriamanitra iray, Andriamanitry ny Baiboly.
Paoly namarana ny taratasy faharoa ho an'ny Korintiana tamin'ny tso-drano: "Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina homba anareo rehetra!" (2 Korintiana 13: 13). Ny fifantohany dia ny fitiavan'Andriamanitra, izay raisintsika amin'ny alàlan'ny fahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ary ny firaisana sy ny fifandraisana amin'ny Andriamanitra ary amin'ny tsirairay, izay omeny amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.
Firy ny "olona" napetrak'Andriamanitra?
Betsaka ny olona tsy manana eritreritra afa-tsy izay lazain'ny Baiboly momba ny firaisan'Andriamanitra. Ny ankamaroany dia tsy mieritreritra izany. Misy kosa mihevitra fa olona mahaleo tena telo; ny sasany manana loha telo; ny hafa izay afaka manova ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amin'ny sitrapo. Ity dia sombina kely fotsiny avy amin'ny sary malaza.
Betsaka ny manandrana mametraka ny fampianarana ara-Baiboly momba an'Andriamanitra amin'ny teny hoe "Andriamanitra tokana", "Trinity" na "Trinity." Na izany aza anefa, raha manontany izay lazain'ny Baiboly momba azy ianao, dia mila manome fanazavana ianao indraindray. Betsaka ny sarin'ny olona momba ny Trinite dia miorina amin'ny tongotra mifototra amin'ny tongony tanimanga, ary ny antony iray lehibe ho an'ny tsy fisian'ny mazava dia mitoetra ao amin'ny fampiasana ny teny hoe "olona".
Ny teny hoe "olona" ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny famaritana Alemanina momba ny Trinite dia manondro olona telo. Ohatra: "Ny Andriamanitra tokana dia ao amin'ny olona telo ... iray ireo manana ny toetra ananan ... Iray telo ireo (tena misy) samy hafa (Rahner / Vorgrimler, IQ an'ny rakibolana teolojia, Freiburg 1961, p. 79). Raha mifandraika amin'Andriamanitra, ny dikan'ny hoe "olona" dia manome sary mivaingana: izany hoe ny fahatsapana fa voafetra Andriamanitra ary ny maha-Andriamanitra azy dia avy amin'ny fahitana fa olona telo tsy miankina izy. Tsy izany no zava-misy.
Ny teny alemà hoe "olona" dia avy amin'ny persona latina. Amin'ny fiteny teolojika latinina, persona dia nampiasaina hanondroana ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, fa amin'ny dikany hafa noho ny teny alemà hoe "olona" amin'izao andro izao. Ny tena dikan'ny persona dia ny "saron-tava". Amin'ny heviny ara-panoharana, dia nitantara ny anjara anjara tamin'ny filalaovana izy, tamin'io fotoana io, nisy mpilalao iray nipoitra tamin'ny lalao iray tamin'ny anjara toerana maro, ary isaky ny anjara asany dia saron-tava no izy. Fa na io teny io aza, na dia tsy mamela ny fanaratsiana olona telo loatra izany dia mbola malemy ary diso Engariika ny mifandray amin'Andriamanitra. Ny diso satria ny ray sy ny zanany ary ny Fanahy Masina dia mihoatra ny andraikitra izay raisin'Andriamanitra, ary satria ny mpilalao dia afaka mitana andraikitra iray ihany, nefa Andriamanitra dia Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina foana. Mety hoe teôlôjiana dikan-teny ilazana ny mety rehefa nampiasa ny teny persona izy. Na izany aza, tsy azo inoana hoe hisy olo-meloka hahafantatra azy tsara. Na ankehitriny aza, ny teny hoe "olona", manondro an Andriamanitra dia mora mitarika ny olona salanisa amin'ny làlana diso raha tsy miaraka amin'ny fanazavana fa ny olona iray dia tsy maintsy mieritreritra zavatra hafa tanteraka eo ambanin'ny "olona" ao amin'ny andriamanitra fa tsy eo ambanin'ny "olona" ao fahatsapan'olombelona.
Na iza na iza miteny amin'ny fitenintsika andriamanitra amin'ny olona telo dia tsy afa-manoatra fa andriamanitra telo mahaleo tena. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy hanavahana ireo hoe "olona" sy "maha" izy. Fa tsy izany no nanambaran'Andriamanitra ny Baiboly. Iray ihany Andriamanitra, fa tsy telo. Ny Baiboly dia manambara fa ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, izay miara-miasa samy hafa, dia tokony ho takatra ho toy ny fomba iray mandrakizay, amin'ny maha-Andriamanitra tokana ny Baiboly azy.
Iray andriamanitra: telo hypostases
Raha tiantsika ny maneho ny fahamarinana ara-baiboly fa "iray" ary "telo" Andriamanitra amin'ny fotoana iray dia tsy maintsy mikaroka teny izay tsy manome fahatsapana isika fa misy andriamanitra telo na andriamanitra telo tsy miankina. Ny Baiboly dia mitaky ny tsy hanaiky lembenana amin'ny firaisan'Andriamanitra. Ny olana dia: amin'ny teny rehetra manondro izay noforonina, dia misy ampahany amin'ny fiteny tsy mamitaka izay mety hamitaka. Ny ankamaroan'ireo teny, ao anatin'izany ny teny hoe "olona", dia mirona mampifandray ny toetran'Andriamanitra amin'ny filaharana noforonina. Amin'ny lafiny iray, ny tenintsika rehetra dia mifandraika amin'ny filaminana noforonina amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Zava-dehibe ny manazava mazava tsara ny tiana holazaina sy ny tiana holazaina rehefa miteny an'Andriamanitra amin'ny tenin'olombelona isika. Teny mahasoa - sary iray izay nametrahan'ireo Kristiana miteny grika ny firaisan'Andriamanitra ary ny telo-polo izay hita ao amin'ny Hebreo 1: 3. Ity andalana ity dia mampianatra amin'ny fomba maro. Izao no vakiny: "Izy [ny zanak '] dia taratry ny voninahitr' [Andriamanitra] sy ny endrik 'ny maha-izy azy ary mitondra ny zava-drehetra amin'ny teniny mahery ..." Avy amin'ny andian-teny hoe "taratry ny [taratra] sy ny voninahiny" dia afaka mahazo hevitra maro isika mitokana: ny zanaka dia tsy misaraka amin'ny rainy. Ny zanakalahy dia tsy ambany noho ny ray. Ary ny zanaka dia maharitra, tahaka ny ray. Amin'ny teny hafa, ny zanakalahy dia toy ny ray, ny fomba fitaratra na ny charisma mifandraika amin'ny voninahitra: raha tsy loharanom-pahazavana tsy misy hazavana, tsy misy taratra be dia be. Ary tsy maintsy manavaka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny tarehin'ity voninahitra ity isika. Tsy mitovy izy ireo fa tsy misaraka. Tahaka ny mampianara dia ilay andian-teny hoe "sary [na imprint, character, image] ny maha-izy azy". Ny raim-pianakaviana feno sy feno lao amin'ny zanany.
Andao isika hitodika any amin'ny teny grika, izay midika hoe "esen" ao amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany. Izany dia hypostasis. Izy io dia ahitana ny hypo = "eo ambany" sy stasis = "mitsangana" ary manana ny dikan'ny hoe "mitsangana eo ambanin'ny zavatra iray". Ny tiana holazaina dia ny - araka ny holazaintsika - mijoro "ao ambadiky ny zavatra" iray, ohatra hoe manao azy io. Hypostasis dia azo faritana hoe "zavatra tsy misy hafa tsy misy". Azonao atao ny manadihady azy ireo ho "antony mahatonga azy", "antony ilazanaana".
"Fisia-maha" (Plural: "hypostases") no teny tsara hilazana ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Teny ara-baiboly izy io ary manome fisarahana eo amin'ny lafiny ara-tsaina eo anelanelan'ny toetran'Andriamanitra sy ny filaharana noforonina. Na izany aza, ny "olona" dia mety ihany koa, eo ambanin'io (tsy maintsy ilaina) takiana fa ny teny dia tsy takatry ny sain'olombelona manokana.
Ny antony iray mahatonga ny "olona" - takatra tsara - dia mifandraika amin'Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Ka tsy mety ny milaza fa tsy manam-pahefana izy. Tsy mivavaka amin'ny vato sy zavamaniry izahay, na ny hery tsy miankina "ao ambadiky ny cosmos", fa "olona velona". Andriamanitra manokana, fa tsy olona amin'ny heviny hoe olona isika. "Satria Andriamanitra aho fa tsy olona ary izaho no Saint eo aminareo» (Hosea 11: 9). Andriamanitra no mpamorona - ary tsy ampahany amin'ny noforonina. Manana fiandohan'ny fiainana ny olona, ​​manana vatana, mihalehibe, samy hafa, mitovy taona ary maty amin'ny farany. Ambonin'izany rehetra izany Andriamanitra, kanefa mbola mitondra tena manokana amin'ny fifandraisany amin'ny olona izy.
Lehibe lavitra noho izay rehetra azon'ny fitenin'ny olona Andriamanitra; na izany aza dia izy manokana ary tia antsika lalina. Be dia be ny volombava momba azy, fa tsy mangina amin'ny zavatra rehetra izay mihoatra ny fetran'ny fahalalan'ny olona. Amin'ny maha-olona voafetra dia tsy azontsika ny tsy manam-petra. Wu · afaka mahalala an'Andriamanitra eo amin'ny tontolon'ny fanambarana nataony, saingy tsy afaka mamantatra azy tanteraka isika satria voafetra ary tsy manam-petra Izy. Ny zavatra nambaran'Andriamanitra tamintsika dia marina. Marina ilay izy. Zava-dehibe.
Miantso antsika Andriamanitra: "Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy" (2 Petera 3:18). Hoy Jesosy: "Fa izao no fiainana mandrakizay, dia hahafantatra anao izy, dia ianao irery no Andriamanitra marina, ary Jesosy Kristy, izay efa nirahinao." (Jaona 17:3). Arakaraka ny anekentsika an'Andriamanitra no vao mainka miharihary amintsika ny halehibentsika sy ny halehiben'izy ireo.
6. Fifandraisan'olombelona amin'Andriamanitra
Tamin'ity fampidirana ity dia nanandrana namorona fanontaniana fototra amin'ity bokikely ity fa mety hanontany an'Andriamanitra ny olona. Inona no hanontaniantsika raha afaka mametraka fanontaniana toy izany isika? Ny fanontanianay hoe "Iza ianao?" mamaly ilay mpamorona sy mpitondra ny cosmos miaraka amin'ny: "ho lasa ho izay aho" (Eksodosy 2:3) na hoe "Izaho no izy" (Fandikana ny habe). Andriamanitra manazava ny tenany amintsika amin'ny fahariana (Salamo 19:2). Hatramin'ny fotoana nanaovany antsika dia efa nifampiraharaha tamin'ny olombelona Izy. Indraindray toy ny kotroka sy tselatra, toy ny tafio-drivotra, toy ny horohoron-tany sy afo, indraindray dia toy ny "karazan-jiro mangina sy malefaka" (Eksodosy 2:20; 18 Mpanjaka 1: 19-11) Nihomehy mihitsy izy (Salamo 2:4). Ao amin'ny firaketana ara-Baiboly dia miresaka momba ny tenany Andriamanitra ary mamaritra ny fihetseham-pony amin'ireo olona nihaona mivantana taminy. Manambara ny tenany Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny Fanahy Masina.
Ankehitriny, tsy te-hahafantatra hoe iza Andriamanitra. Tiantsika ho fantarina koa izay noforoniny ho antsika. Te hahafantatra hoe inona ny drafiny ho antsika. Tianay ho fantatsika izay ho avy ho antsika. Inona no ifandraisantsika amin'Andriamanitra? Iza no "tokony" hananantsika? Ary iza no ho azontsika amin'ny hoavy? Nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny isika (Genesisy 1: 1-26). Ary ho an'ny hoavintsika, ny Baiboly - indraindray tena mazava tsara - manambara zavatra ambony lavitra noho izay azontsika nofinofy ho olombelona voafetra.
Aiza isika izao
Ny Hebreo 2: 6-11 dia milaza amintsika fa kely kokoa noho ny anjely isika ankehitriny. Andriamanitra kosa dia "nosatrohantsika fiderana sy fanomezam-boninahitra" ary nampanaiky antsika ny zavaboary rehetra. Ho an'ny ho avy "tsy manana na inona na inona afa-tsy izay tsy maha-olom-pantany azy Izy. Fa izao kosa tsy hitantsika fa ny zavatra rehetra dia manoa azy." Nanomana hoavy mandrakizay sy be voninahitra ho antsika Andriamanitra. Saingy mbola misy zavatra hafa rehetra ao. Isika dia meloka, manala antsika amin'Andriamanitra (Isaia 59: 1-2). Ny ota dia namorona rantsan-javatra tsy hay tohaina eo anelanelan'Andriamanitra sy amintsika, sakana iray izay tsy ho vitantsika mandresy irery.
Raha ny marina, anefa ny fahatapahana dia efa sitrana. Jesosy nanandrana fahafatesana ho antsika (Hebreo 2:9). Nanefa ny sazy fanamelohana ho faty, izay niampangantsika ny fahotantsika hitarika "zanakalahy maro homem-boninahitra" (Andininy 10). Araka ny voalazan'ny Apokalypsy 21: 7, dia tian'Andriamanitra ho ao anatin'ny fifandraisan'ny ray isika. Satria tiany isika ary efa nanao ny zavatra rehetra ho antsika - ary mbola manao toy ny maha-avy ny famonjena antsika - tsy menatra i Jesosy hiantso antsika sary. (Hebreo 2: 10-11).
Inona no takiana amintsika ankehitriny?
Ny Asa 2:38 dia miantso antsika hibebaka amin'ny fahotantsika ary hanao batisa antsika, an'ohatra, halevina. Andriamanitra dia manome ny Fanahy Masina amin'ireo izay mino fa i Jesoa Kristy no Mpamonjy sy Tompony sy Mpanjakany (Galatiana 3: 2-5). Rehefa mibebaka isika - miala amin'ny fanaovan-tena, izay manota eto amin'ity tontolo ity, dia manomboka mino azy isika. Vao teraka indray isika (Jaona 3: 3), fiainana vaovao ao amin'i Kristy dia omen'ny Fanahy Masina antsika, nateraky ny Fanahy tamin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ary amin'ny asa famonjen'i Kristy. Ary avy eo? Ary mitombo "amin'ny fahasoavana sy fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy" isika. (2 Petera 3:18) mandra-piafaran'ny fiainana. Notendrena isika handray anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ary aorian'izay dia “hiaraka amin'ny Tompo mandrakariva” isika (1 Tesaloniana 4: 13-17).
Ny lova tsy azo lavina
Andriamanitra dia "niteraka antsika ... amin'ny fanantenana velona amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho lova tsy azo vonoina ary tsy azo vonoina ary malazo", lova izay nasehon'ny herin'Andrimanitra tamin'ny fotoana farany " (1 Petera 1: 3-5) Amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia lasa tsy maty isika (1 Korintiana 15:54) ary mahazo "vatana ara-panahy" (Andininy 44). "Ary ahoana no nitondranay ny sarin '[Adama olombelona]," hoy ny andininy 49, "koa hitondra ny sarin'ny lanitra isika." Manomboka izao, amin'ny maha "zanaky ny fitsanganana amin'ny maty", dia tsy feon'ny fahafatesana intsony isika (Lioka 20:36).
Misy zavatra tsara kokoa ve noho ny lazain'ny Baiboly momba an'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika aminy? Ho "tahaka Azy [Jesosy] isika, satria hahita azy tahaka azy" (1 Jaona 3:2). Mampanantena ny Apokalypsy 21: 3 fa ho amin'ny vanim-potoana vaovao sy ny tany vaovao: "Indro, ny tranon'Andriamanitra ho an'ny olona! Ary hitoetra eo aminy izy, ary izy ireo ho olony, ary izy tenany, Andriamanitra miaraka aminy. andriamanitrao ... "
Ho tonga iray amin'Andriamanitra isika - amin'ny fahamasinana, ny fitiavana, ny fahatanterahana, ny fahamarinana ary ny fanahy. Amin'ny maha-zanany tsy mety maty azy dia hamorona ny fianakavian'Andriamanitra amin'ny fomba feno isika. Hizara fiarahana lavorary aminy isika amin'ny fifaliana mandrakizay. Tena mahafinaritra sy manome aingam-panahy
Nanomana ny hafatry ny fanantenana sy famonjena mandrakizay ho an'izay mino azy Andriamanitra.
Bokikely an'ny WKG
© COPYRIGHT 2021 • NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA (SWITZERLAND) • CONTACTS • LEGAL NOTES • Fitsipika • CONTACT